Jaamacadda Fudan University Cancer Center - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Jaamacadda Fudan University Shanghai Cancer Center
Jaamacadda Fudan University Cancer Center (FUSCC) waa mid ka mid ah unugyada maareynta miisaaniyadda ee hoos timaadda Guddiga Caafimaadka Qaranka. Qeybta dhismaha wakiilka oo ay si wada jir ah u dhisteen Wasaaradda Waxbarshada, Guddiga Caafimaadka Qaranka iyo Dowladda Dadweynaha ee Dowladda Hoose ee Shanghai. Waxaa la aasaasay bishii Maarso 1, 1931. FUSCC waxay hadda u samaysay inay noqoto cosbitaal darajo-A ah oo ku hawlan isdhexgalka dhaqanka daaweynta, waxbarashada caafimaadka, cilmibaarista kansarka iyo ka hortagga kansarka.
Bishii Diseembar 4, 2018, waxaa ku dhawaaqay Guddiga Caafimaadka Qaranka oo ah dufcaddii ugu horreysay ee baaritaanka burooyinka astaamaha kala duwan iyo isbitaalada tijaabada daaweynta.
Dhamaadka sanadka 2019, isbitaalka wuxuu runti furay in kabadan 2,000 oo sariirood.FUSCC waxay kakoobantahay lix iyo labaatan waaxood: Waaxda Madaxa & Qalliinka Neck, Waaxda Qalliinka Naasaha, Waaxda Qalitaanka Thoracic, Waaxda Qalitaanka Caloosha, Waaxda Qalliinka mindhicirka, Waaxda Cudurrada, Waaxda Qalliinka Pancreatic, Waaxda Qalliinka Cagaarshowga, Waaxda Qalitaanka neerfaha, Waaxda Qalitaanka Lafta & Cadka jilicsan, Waaxda Cudurka Haweenka, Waaxda Caafimaadka Onkolojiga, Xarunta Daaweynta Cudurka Dabeecadda, Waaxda TCM-WM ee Isku-dhafan Iskuduwaha, Waaxda Daaweynta Dhamaystiran, Waaxda Suuxdinta, Waaxda Daaweynta Wax-ka-qabashada, Waaxda Cudurrada, Waaxda Farmashiyaha, Waaxda Shaybaarada Cilmiga, Waaxda Endoscopy, Waaxda Baaritaanka Ultrasound, Waaxda Raadinta Cilmiga, Waaxda Daawada Nuclearka, Waaxda Wadnaha - Shaqada Sambabada, iyo Waaxda Caafimaadka Nafaqada.
FUSCC, kansarka iyo cudurada ayaa si rasmi ah loogu aqoonsan yahay inay tahay edbinta tacliimeed ee muhiimka ah Wasaaradda Waxbarashada, siday u kala horreeyaan; cudurka kansarka, cilmiga cudurada iyo TCM-WM Daawada Isku-dhafan, oo ah edbinta caafimaad ee muhiimka ah ee qaranka, siday u kala horreeyaan; iyo kansarka naasaha, shucaaca shucaaca, cudurada, oo ah anshaxa caafimaad ee muhiimka ah ee hoos imanaya Komishanka Caafimaadka Qaranka. Kooxda cilmi baarista aasaasiga ah iyo daaweynta ee ku saabsan kansarka naasaha ayaa si rasmi ah loogu calaamadeeyay koox hal abuur leh Wasaaradda Waxbarshada. Degmo ahaan, FUSCC waxaa loo oggol yahay inay yeelato saddex xarumood oo daaweyn caafimaad ah oo ku saabsan kansarka, shucaaca iyo kansarka naasaha, iyo gaar ahaan inay lahaato laba xarumood oo daaweyn caafimaad ah oo mudnaanta la siinayo burooyinka halista ah iyo qalliinka wadnaha. Cudurkeeda sidoo kale waxaa si rasmi ah loogu aqoonsan yahay inuu yahay anshax marinta caafimaadka degmada; kansarka, cudurada, shucaaca, cudurada dumarka iyo cudurada wadnaha, inay noqdaan shan farsamo oo muhiim ah oo dawlada hoose ah, oo waliba kuxiran Xarunta Xakamaynta Tayada Caafimaadka ee Shanghai, Xarunta Xakamaynta Tayada Radiotherapy, Xarunta Xakamaynta Tayada Kansarka Chemotherapy iyo Ururka Shanghai Anticancer.